Mucaaradka Yemen - BBC News Somali
21 Abriil 2011
Image caption mudaharaadyada Yemen
Mucaaradka Yemen ayaa ku gacan saydhay hindise xal doon ah oo dalalka Khaliijku ay u soo jeediyeen mucaaradka iyo dawladda si loo dhexdhexaadiyo.
Hindisayaashani waxa laga soo saaray shir toddobaadkani ay ku yeesheen dawladaha Khaliijku dalka Saudi Arabia oo laga hadlayey xiisadaha Yemen.
Mucaaradku waxay ku adkaysteen xataa inayna diyaar u ahayn inay meel iskugu yimaaddaan oo ay wada hadal la yeeshaan xisbiga madaxweyne Ali Abdalla Salah iyo xukuumaddiisa. Waxana sheegeen in aanay u cuntamayn wax ka yar Ali Abdalla Salah oo marka hore meesha ka baxa, ama iscasila.
Laakiin wakiilo ka socda dawladda Yemen ayaa iyagu la kulmi doona wasiirrada arrimaha debada ee khaliijka, si ay uga xogwarramaan qorshaha dawladda. Waxana la sheegay in Ali Abdalla Salah uu diyaar u yahay in uu xukunka ka daadego, laakiin marka hore uu doonayo dammaanad-qaad ah in la joojiyo mudaharaadyada oo wax weyn u dhimay dhaqaalihii dalkaasi, iyo in la sameeyo dawlad midnnimo oo qaran.
Laakiin qorshahani waxa aan kalsooni ku qabin mucaaradka oo rumaysan in xataa haddii la sameeyo doorashooyin, inta Ali Abdalla Salah uu xukunka joogo, in xisbigaasu uu ku shuban doono doorashooyinkaasi.
Waxana sii kordhaya walaaca dalalka gobolka iyo caalamkba ka qabo halka ay ku danbayn doonto xaaladda dalka Yemen, iyada oo mucaaradkuna aanu weli la iman qorshe cad oo lagu hoggaamiyo dalkaasi, ka bacdi marka uu xukunka ka daadego madaweynuhu, Ali Abdalla Salah.